"မမအထာ" သီချင်းလေးက ပြည်တွင်းမှာသာမကပဲ ပြည်ပမှာပါလူကြိုက်များနေကြောင်းနိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ Tik Tok နဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ရတနာမိုင် - Cele Connections
မိုင်လေးလို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော် ရတနာမိုင်ကတော့ သီချင်းဆိုကောင်းရုံသာမကပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရတနာမိုင်က အခုဆိုရင် အသက် (၃၀) ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူအပင်မရှိတဲ့ ရတနာမိုင်က ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုပြီးအချိန်ပေးဖြစ်သလို သီချင်းသစ်တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ချပြတင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ထွက်ရှိထားတဲ့ ရတနာမိုင်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အများအပြားရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရတနာမိုင်က သူမရဲ့ “မမအထာ” သီချင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးရင်း “ကိုယ်ဆိုထားတဲ့ မမအထာသီချင်းလေးနဲ့ ကထားတာ ချစ်လိုက်တာ သူ့ကို ❤️ I love the way you dance to my song ! 🥰” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ရတနာမိုင်ချစ်မယ်ဆိုလည်း ချစ်ချင်လောက်အောင် နိုင်ငံခြားသူလေးကတော့ အရမ်းကို သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်နိုင်ပေမယ့် ဗီဒီယိုလေးမှာ ချစ်စရာကောင်းစွာ သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“မမအထာ” သီခငျြးလေးက ပွညျတှငျးမှာသာမကပဲ ပွညျပမှာပါလူကွိုကျမြားနကွေောငျးနိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ Tik Tok နဲ့တကှ ပွသလာတဲ့ ရတနာမိုငျ
မိုငျလေးလို့ ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ အဆိုတျော ရတနာမိုငျကတော့ သီခငျြးဆိုကောငျးရုံသာမကပဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးကိုပါ ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ရတနာမိုငျက အခုဆိုရငျ အသကျ (၃၀) ကြျောအရှယျကို ရောကျရှိနပွေီဆိုပမေယျ့ အခုခြိနျထိ အိမျထောငျမပွုသေးပဲ တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးအဖွဈ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ အပူအပငျမရှိတဲ့ ရတနာမိုငျက ပရိသတျတှအေတှကျ ပိုပွီးအခြိနျပေးဖွဈသလို သီခငျြးသဈတှကေိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို ခပြွတငျဆကျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးကမှ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို ထှကျရှိထားတဲ့ ရတနာမိုငျက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အမြားအပွားရရှိပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ရတနာမိုငျက သူမရဲ့ “မမအထာ” သီခငျြးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးစှာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မြှဝပေေးရငျး “ကိုယျဆိုထားတဲ့ မမအထာသီခငျြးလေးနဲ့ ကထားတာ ခဈြလိုကျတာ သူ့ကို ❤️ I love the way you dance to my song ! 🥰” ဆိုပွီး ပရိသတျတှကွေညျ့ရှုနိုငျဖို့ မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ။
ရတနာမိုငျခဈြမယျဆိုလညျး ခဈြခငျြလောကျအောငျ နိုငျငံခွားသူလေးကတော့ အရမျးကို သီခငျြးရဲ့ အဓိပ်ပာယျကို နားမလညျနိုငျပမေယျ့ ဗီဒီယိုလေးမှာ ခဈြစရာကောငျးစှာ သရုပျဆောငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ရတနာမိုငျရဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ ကပွထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကွညျ့ပွီး သဘောကကြွမယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။